कहिले बन्लान् पुल र सडक ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / कहिले बन्लान् पुल र सडक ?
कहिले बन्लान् पुल र सडक ?
Posted by: युगबोध in प्रमुख समाचार, स्लाइड January 6, 2019	0 89 Views
घो राही । यो वर्ष बन्ला ? आउदो वर्ष बन्ला ? पुल बन्ला, सडक बन्ला भन्दाभन्दै चार पाच वर्ष बितिसक्यो तर अझै बनेको छै न । पुल र सडक निर्माण भएदे खि प्रत्ये क वर्षको हिउद, बर्खा, दशै ं तिहार सकिन्छ तर पुल र सडकको काम अझै सकिएको छै न । घो राहीको चारले न सडक एक तहको कालो पत्रे सकिने तरखरमा छ । आधा अझै धुलाम्मे छ ।
सर्वसाधारण कहिले बन्छ र कहिले बन्ला भन्दै वर्षातमा बाढी र हिलो , हिउदमा धुलै –धुलो को समस् या भो ग्नु परिरहे को छ । त्यो दुःख चारपाच वर्षदे खि नै भो ग्दै आइरहनुपरे को छ । तर सडक र पुल निर्माणले पूर्णता अझै पाउन सके को छै नन् । जसका कारण पुल र सडक निर्माणको ढिलासुस् तीले सर्वसाधारणलाई आजित बनाइसके को घो राही–१२ का बालाराम शर्माले बताउनुभयो  । उहाले भन्नुभयो – ‘पुल र सडक निर्माण हे र्ने मात्रै भयो  । सुविधा पाउने अझै बने को छै न ।’
लमही–तुलसीपुर सडकमा पुल चार/पाच वर्षदे खि निर्माणाधीन अवस् थामा छन् । कतिपय निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसके का छन् भने कतिपय आधाउधीमा रो किएका छन् । प्रायः पुल निर्माणका लागि तो किएको म्याद सकिसके का छन् । तर निर्माण कार्य अझै सकिएका छै नन् । जसका कारण सर्वसाधारणले अझै हिलो र धुलो को सास्ती खे प्नु परिरहे को छ । सडक र पुल निर्माणाधीन खो लामा परे का खाल्टाखुल्टीले चार/पाच वर्षदे खि सर्वसाधारणको दै निकीलाई कष्टकर बनाउदै आइरहे का छन् । समयमा निर्माण कार्य नसक्दा सडक डिभिजन कार्यालय दाङले हर्जनावापत लाखौ ं रुपै या रो क्का गरे को छ ।
निर्माण कम्पनीको ढिलासुस् ती र सरो कारवाला निकायहरुको हे लचक्र्याइका कारण सडक र पुल निर्माण कार्य वर्षांै दे खि अलपत्र बनिरहे को स् थानीयहरुको भनाइ छ । घो राहीका बुद्धिप्रकाश ओ लीले भन्नुभयो – ‘पत्रे खो ला पुल पा“च वर्षदे खि अलपत्र छ । अलिअलि काम भयो अहिले जस् ताको त्यस्तै छ । अरु खो लाहरुमा खाल्टा र धुलो को बिजो ग छ ।’
यसै गरी घो राही र तुलसीपुरमा निर्माणाधीन चारले न सडक विस्तारको काम पछिल्लो समय तीव्र रुपमा भइरहे पनि धुलो का कारण सर्वसाधारणले सास् ती खे प्नु परिरहे को घो राही मे नरो डका विष्णु पौ डे लले बताउनुभयो  । उहाले भन्नुभयो – ‘धुलो ले बे हाल बनाएको छ । बल्लबल्ल कालो पत्रे को काम हुन्छ भन्ने आशा जगाएको छ ।’ तर तुलसीपुर चो कदे खि पश्चिमतर्फको निर्माणाधीन चारले न सडकको अवस् था भने धुलाम्मे रहदै आइरहे को छ ।
जसले स्थानीयवासीलाई दै निक समस् याग्रस् त बनाउदै आइरहे को छ । लापरवाहीका कारण समयमा यो जना सम्पन्न हुन नसक्दा सर्वसाधारणले दुःख झे ल्नु परिरहे को पौ डे लको भनाइ छ । दुई वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सडक र पुलको सास्ती चार वर्षपछिसम्म पनि भो ग्नु परिरहे को छ ।
हर्जानावापत एक करो ड २९ लाख रकम रो क्का
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने चारले न सडक र पुल निर्माण आ.व. २०७५/०७६ आधाउधी सकिसक्दासम्म पनि अझै पूर्णता पाउन नसक्दा सडक डिभिजन कार्यालय दाङले हर्जाना वापत लाखौ ं रुपै या रो क्का गरिदिएको छ ।
समयमा यो जना निर्माण गर्न नसक्दा हर्जनावापतको रकम रो क्का गर्न बाध्य भएको डिभिजन प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माले बताउनुभयो  । तुलसीपुर चारले न सडकको ४९ लाख, घो राही चारले न सडकको ४० लाख र कटुवाखो ला पुलको ४० लाख गरी एक करो ड २९ लाख रुपै या“ हर्जनावाफत रो क्का गरिएको जानकारी दिनुभयो  ।
सक्रामखो ला पुलबाहे क अन्य पुलहरुको सम्झौ ता म्याद भर्खर–भर्खर सकिएकाले कतिपयको म्याद थपको प्रक्रियाका लागि जायज कारण खो जिरहे को उहाले बताउनुभयो  । तर कटुवाखो ला, पत्रे खो ला र चारले न सडक विस्तार भने हर्जाना काटे र भए पनि निर्माण कार्य पूर्णता दिने तयारी भइरहे को उहा“को भनाइ छ । उहाले भन्नुभयो – ‘अन्य पुलहरुको बारे मा जायज कारण भए समय थप गर्न सकिन्छ । तर कटुवा, पत्रे र चारले न सडक विस् तार हर्जाना भरे र काम गरिने छ ।’
आउदो असारमा सकिन्छ कि ?
निर्माणाधीन पुल र सडक आउदो असार मसान्तसम्म पत्रे र सिस्ने खो ला पुलबाहे क घो राही र तुलसीपुरको चारले न सडक र बाकीको निर्माण कार्य सकिने सडक डिभिजन र निर्माण कम्पनीहरुको भनाइ छ । सडक डिभिजन दाङका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्मा र कान्छाराम/शंकरमाली निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि पदमराज शर्माले कटुवाखो लाको पुलको निर्माण कार्य अन्तिम र तुलसीपुर चो क सम्मको चारले न सडक विस्तार एकतहको कालो पत्र सकिसके काले आउदो बर्षातसम्ममा सकिने बताउनुभयो  । बाकी पुलहरुको पनि आधाभन्दा बढी काम भइसकेकाले यो आउदो बर्षाको बाढीको समस् या सर्वसाधारणहरुले खे प्नुनपर्ने उहाको भनाइ छ । शर्माद्वयले भन्नुभयो – ‘कटुवाखो लाले के ही आशा पलाएको छ । अब कटुवाखो ला पुलको काम करीव दुई महिनामै सकिन्छ भने बा“की आउ“दो वै शाख÷जे ठसम्ममा सकिने छ ।’
कटुवाखो ला पुले को तीनपटक डिजाइन ‘चे न्ज’
कटुवाखो ला पुल र कटुवाखो लादे खि तुलसीपुर चो कसम्मको चारले न सडक विस् तारको जिम्मा लिएका कान्छाराम/शंकर माली निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि पदमराज शर्माले हर्जाना भरे र भए पनि जनताको से वाका लागि आफूले काम गरिरहे को बताउनुभयो  । कटुवाखो ला पुल निर्माण कम्पनीको कमजो रीले भन्दा सम्बन्धित निकायहरुको कमजो रीले ढिलाइ भएको उहाले आरो प लगाउनुभयो  ।
तीन पटकसम्म कटुवाखो ला पुलको डिजाइन फे रे र काम गर्नुपर्दा ढिलाइ भएको र त्यसको दो ष निर्माण कम्पनीले भो ग्नुपरे को उहाको भनाइ छ । उहाले भन्नुभयो – ‘कटुवाखो ला पुलको तीन पटक डिजाईन फे रिदा करिब दुई वर्ष लागे को छ । तर दो ष कम्पनीले खे प्नुप¥यो  । जसका कारण ढिलाइ भएको हो  ।’ कटुवा र पत्रे खो लाको अन्य खो लाहरुको भन्दा फरक डिजाइन भएकाले डिजाइन पटक–पटक असफल भएको उहाको भनाइ छ । जसले सर्वसाधारणमाथि दुःख र निर्माण कार्यमा आर्थिक व्ययभार थपे को उहाले बताउनुभयो  ।
Previous: रोल्पा नगरपालिकाको चौथो नगरसभा
Next: बालविवाह रोक्ने प्रतिबद्धता